विचित्र संसार Archives - दैनिक नेपाल न्युज
हिन्दू धर्मग्रन्थ गीता को शुत्र छ ‘योगः कर्मसु कौशलम्’ अर्थात जुन काम गर्नु हुन्छ एकदम लागेर गर्नुस् । यो श्लोकको अर्थ जुन काम गर्नु हुन्छ त्यसमा पुरै ध्यान लगाउनुस्, दक्षता, कुशलता सबै त्यसमै लगाउनुस् । फरक फरक काम गरेर टाउको दुखाउने मानिस सँधै असफल हुन्छ । यस्ता मानिसले स्वास्थ्य, सन्तोष र सुख महसुस् पार्न सक्दैनन् […]
मेषः– परिस्थितिलाई वुझेर मात्र काममा हात हाल्नु होला । कार्य क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । व्यापार व्यवसायमा प्रगतिका सम्भावना देखिने छन् । गीत संगितमा अभिरुची बढ्नेछ । मान्य जनको प्रेरणा,सहयोग सहानुभूति मिल्नेछ । मनलाई नियन्त्रण गरि अगाडि बढ्नु होला । सक्रियताबाट मात्र गन्तव्यमा पुगिनेछ । वृषः– काममा सहजीकरण गरि दिने कोहि हुने छैन । उपलब्धि विहिन […]
प्युठान, ३० असार: यहाँका गाउँगाउँमा फेरि सलह भित्रिएको छ । सोमबार बिहानदेखि जिल्लाका प्रायः सबैजसो क्षेत्रमा फैलिएको सलह मकैबालीमा छिरेपछि किसानले टिन र थाल ठटाउँदै सलह भगाउन थालेका छन् । किसानले धुवाँ बाल्ने, टिन, थाल, जर्किनलगायतका स्थानीय सामग्री ठटाउँदै सलह भगाउन खोज्दा पनि नभागेपछि किसान थप चिन्तित बनेका छन् । लाखौँको सङ्ख्यामा भएकाले भगाउन नसकिएको […]
ज्योतिषहरुका अनुसार सयौँ वर्षपछि श्रावणमा अद्भुत संयोग बनेको छ । श्रावण महिनामा ५ सय ५८ वर्षपछि ४ वटा ग्रहको वक्र योग परेको छ । श्रावण महिनामा योपटक गुरु, शनि, राहु तथा केतुको बक्र परेको छ । अर्थात यी ग्रहहरुको चाल उल्टो हुनेछ । सिंह र कुम्भ राशि भएकाहरुलाई यो संयोग सबैभन्दा शुभ रहनेछ । ५ […]
माता पाथिभराले हामी सबैको रक्षा गरुन्, हेर्नुहोस् आजको राशीफल
मेषः– समय सुधारोन्मुख देखिन्छ । काम गर्दा इज्जत प्रतिष्ठाको ख्याल राखेर गर्नु होला । आफ्ना काम भन्दा अरुका काम बढि हुनेछन् तर काम गरेर जश कम मिल्नेछ । लाभदायक यात्राको सम्भावना देखिन्छ । अरुको भरमा मात्रै काम नगर्नु होला । व्यापार व्यवसायमा खासै प्रगति हुने देखिन्न । आस्था र विश्वास बढ्नेछ । वृषः– समयले साथ […]
नमस्कार, सबैमा सधै जसो यसपटक पनि तपाइको सेवामा हामी ज्योतिष, वास्तु र ग्रहगोचर सम्बन्धि समाग्री लिएर उपस्थित भैसकेका छौँ । आशा छ यस पटकको सामग्री पनि तपाइलाइ अवश्यनै मन पर्ने नै छ । आज हामी, मिथुन राशिका व्यक्तिको स्वभाव कस्तो ? लुकाउछन् यस्ता कुरा ! भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिएर सदाको जस्तै आज पनि उपस्थित […]
हरिशयनी एकादशीमा व्रत बस्दा प्राप्त हुन्छ यस्तो फल !
नमस्कार, सबैमा सधै जसो यसपटक पनि तपाइको सेवामा हामी ज्योतिष, वास्तु र ग्रहगोचर सम्बन्धि समाग्री लिएर उपस्थित भैसकेका छौँ । आशा छ यस पटकको सामग्री पनि तपाइलाइ अवश्यनै मन पर्ने नै छ । आज हामी, हरिशयनी एकादशीमा व्रत बस्दा प्राप्त हुन्छ यस्तो फल ! भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिएर सदाको जस्तै आज पनि उपस्थित भैसकेका […]
हरिशयनी एकादशीमा पुजा, यस्ता पापबाट सदाका लागि मुक्ति !
नमस्कार, सबैमा सधै जसो यसपटक पनि तपाइको सेवामा हामी ज्योतिष, वास्तु र ग्रहगोचर सम्बन्धि समाग्री लिएर उपस्थित भैसकेका छौँ । आशा छ यस पटकको सामग्री पनि तपाइलाइ अवश्यनै मन पर्ने नै छ । आज हामी, हरिशयनी एकादशीमा पुजा, यस्ता पापबाट सदाका लागि मुक्ति ! भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिएर सदाको जस्तै आज पनि उपस्थित भैसकेका […]
आर्थिक सफलताका लागि घरमा लाफिङ बुद्ध राख्नुहोस्…
नमस्कार, सबैमा सधै जसो यसपटक पनि तपाइको सेवामा हामी ज्योतिष, वास्तु र ग्रहगोचर सम्बन्धि समाग्री लिएर उपस्थित भैसकेका छौँ । आशा छ यस पटकको सामग्री पनि तपाइलाइ अवश्यनै मन पर्ने नै छ । आज हामी, आर्थिक सफलताका लागि घरमा लाफिङ बुद्ध राख्नुहोस्, भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिएर सदाको जस्तै आज पनि उपस्थित भैसकेका छौँ । […]